FUN Archives - TheeSayChin
ဖြတ်ထိုးဉာဏ်အားကိုးနဲ့ အနာဂတ်ကာလကို ကြိုတင်ရောက်နှင့်နေကြသူများ
© psiquex7/ Reddit အခုခေတ်မှာ နည်းပညာဟာ နေရာတကာမှာ ရှိနေပြီး လူတွေဟာ နည်းပညာအပေါ်မှာ အများကြီး မှီခိုနေရပါပြီ။ နည်းပညာရဲ့အကူအညီကြောင့် ယနေ့ခေတ်လူတွေဟာ ဘိုးဘေးတွေ လက်ထက်ကနဲ့ယှဉ်ရင် အတော်ကြီး ကွာခြားသွားပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တစ်ချို့သော ဉာဏ်ကြီးရှင်တီထွင်သူတွေကတော့ ပေါ်ပြူလာဖြစ်သင့်သလောက် မဖြစ်ကြပါဘူး။ အောက်ဘက်မှာတော့ အနာဂတ်ကမ္ဘာကို ရောက်နှင့်နေတဲ့အလား ဖန်တီးမှုအသစ်အဆန်းတွေနဲ့ တွေ့ရတဲ့ ဉာဏ်ကြီးရှင်တွေကို brightside ကနေတဆင့် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ဘဝက သင့်ကို သံပုရာသီးတစ်လုံး ပေးခဲ့ရင်… © psiquex7/ Reddit အရေးကြီးတာက စမ်းကြည့်ဖို့ပဲ… © Pisiquex7/ Reddit ဘာမှားနေလို့လဲ…. © lalafreitasr/ Twitter (၂၀၅၀) က လူသား… © psiquex7/ Reddit မိုက်တော့ […]
ကမ္ဘာ့အဆိုးဆုံးကြောင်လေးလို့ သမုတ်ထားတဲ့ အမေရိကန်က ကြောင်ကလေး
Mitchell County Animal Rescue ပါဒီတာ အမည်ရတဲ့ ကြောင်လေးတစ်ကောင်ဟာ ခပ်ဆိုးဆိုးနဲ့ ပေပေတေတေ နေတတ်တဲ့ ကြောင်လေးတစ်ကောင် ဖြစ်ပါတယ်။ သူက အရင်တုန်းက နော့သ်ကယ်ရိုလိုင်းနားက မစ်ရှဲလ်ကောင်တီ တိရစ္ဆာန်စောင့်ရှောက်ရေးဂေဟာမှာ နေခဲ့ဖူးပါတယ်။ နောက်တော့ ဂေဟာမှာနေရင်း သခင်အသစ်က သူ့ကို ချစ်လို့ အိမ်ခေါ်ပြီး မွေးစားဖို့ လုပ်ပါတယ်။ ပါဒီတာက ဂေဟာမှာနေခဲ့ဖူးပေမယ့် ဂေဟာကနေ အိမ်သစ်ဆီ သွားဖို့လည်းဖြစ်လာရော မာနကြီးတစ်ခွဲသားနဲ့ပါ။ ဂေဟာဝန်ထမ်းတွေက သူ့ကို အမှတ်တရ ဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့လုပ်တာကို လုံးဝအရိုက်မခံပါဘူး။ အတော်ပေတဲ့ ကြောင်မလေးပါပဲ။ Mitchell County Animal Rescue အခုဆိုရင် ပါဒီတာက နာမည်အသစ်ရနေပါပြီ။ နိုဝယ်လို့ သူ့သခင်သစ်တွေက နာမည်ပေးထားပါတယ်။ လက်ရှိအိမ်မှာ သူ့ဘဝလေးက အေးချမ်းလှပါတယ်။ သူ့မှာ သူ့ကိုယ်ပိုင် အိပ်ခန်းသက်သက် […]
လေဆိပ်တွေမှာ ဖမ်းယူသိမ်းဆည်းမိခဲ့တဲ့ ဉာဏ်ကြီးရှင်တို့ရဲ့ ပစ္စည်းခိုးသွင်းပုံများ
[email protected] လေဆိပ်တော်တော်များများမှာ လေယာဉ်ပေါ်ယူလို့မရတဲ့ ပစ္စည်းစာရင်းတွေကို အဝင်အဝတံခါးတိုင်းမှာ ကပ်ထားလေ့ရှိကြပါတယ်။ လေယာဉ်ပေါ်တက်ခါနီးမှာလည်း လေဆိပ်ရဲတော်တော်များများဟာ ခရီးသည်တွေရဲ့ အိတ်ကို စစ်ဆေးလေ့ရှိပါတယ်။ ဒီလောက်အစစအရာရာ တင်းကျပ်ထားတာတောင်မှ လူတစ်ချို့ကတော့ မရမက ပစ္စည်းတွေကို ခိုးသွင်းတတ်ကြပါတယ်။ အောက်မှာရှိတဲ့ ပုံတွေကတော့ လေဆိပ်လုံခြုံရေးဂိတ်မှာ ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တဲ့ ပစ္စည်းတစ်ချို့ဖြစ်ပါတယ်။ ၁။ Laptop ထဲမွာ ဗံုးဆင္ထားတာတဲ့ tsa ၂။ လေယာဉ်ပေါ် တိရစ္ဆာန်မတင်ရဆိုတော့ ခရီးဆောင်အိတ်ထဲ ကြောင်ထည့်လာပြန်ရော tsa ၃။ မသိရင်တော့ ပန်းစည်းလေးပေါ့ tsa ၄။ စက်ဘီးတာယာထဲ လက်နက်ပါတယ်လို့ တော်ရုံဘယ်သူထင်မှာလဲ tsa ၅။ ကြံကြံဖန်ဖန် မြွေခိုးသွင်းတာတဲ့ tsa ၆။ သစ္ပင္ခုတ္သမားထင္ပါတယ္ tsa ၇။ မေ့ပြီး နှုတ်ခမ်းနီ ဆိုးမိရင်ဒုက္ခ tsa ၈။ […]
သခင်ကို စိတ်ပျက်အောင် လုပ်နေပေမယ့် ချစ်စရာကောင်းနေဆဲ ခွေးလေးတွေရဲ့ အပြုအမူများ
© livieluv / reddit , © FamilyGhost / pikabu လူတွေက ခွေးလို့ဆိုလိုက်ရင်ပဲ သခင်အပေါ်မှာ ကောင်းလွန်းတဲ့ သတ္တဝါတွေလို့ ယူဆကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း သူတို့ဟာ တစ်ခါတစ်လေမှာ သခင်ကို စိတ်မကောင်းဖြစ်အောင်လည်း လုပ်တတ်ပါသေးတယ်။ အောက်ဘက်မှာတော့ သခင်ကို စိတ်ပျက်အောင်လုပ်နေပေမယ့် ချစ်စရာကောင်းနေဆဲ ခွေးလေးတွေကို brightside ကနေတဆင့် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ သူစိမ်းမလာအောင် အိမ်ကို သေချာစောင့်ဖို့ မှာထားကာမှ…. © Senji06 / reddit ကဲ ထပ်မေးပါမယ်…. ပါးစပ်ထဲမှာ ဘာဝှက်ထားလဲ ပြော.. © imskytrash / twitter သူ့ကိုယ်သူ ပန်းပင်နဲ့များ မှားနေသလား… © Bookestina / reddit တိုက်ခန်းထဲက ဇိမ်အကျဆုံးနေရာကို […]
Twitter/TheBeerRunner မာရသွန်အပြေးပြိုင်ပွဲကိုတော့ လူတော်တော်များများသိကြမှာပါ။ တာထွက်ကနေစပြီးတောက်လျှောက်ပြေးရမှာ ပန်းတိုင်အထိပါပဲ။ ပြေးနေတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်မှာလဲ အကွာအဝေးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားမှာ မောရင်သောက်လို့ရအောင် ရေသောာက်လို့ရမယ့်နေရာလေးတွေရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မောရင်ရေသောက်လို့ရမယ့်အစား ဘီယာပဲတိုက်တဲ့ မာရသွန်အပြေးပြိုင်ပွဲဆိုရင်ကော သင်စိတ်ဝင်စားမလားဗျ။ We’re on the hunt for crazy vikings to join us in our record breaking marathon Viking Ship ‘The Million Squid’. We’re aiming to raise £1 million for Children with Cancer by taking our ship to marathons around the globe. Interested in […]
[email protected] Owl Sanctuary လန်ဒန်မြို့မှာရှိတဲ့ ရမြောင်းတစ်ခုထဲက ဇီးကွက်လေးတစ်ကောင်ဟာ အရမ်းဝနေပြီး ပျံသန်းဖို့ အဆင်မပြေဖြစ်နေတဲ့အပြင် ဒဏ်ရာအနည်းငယ် ရနေတာကြောင့် ကယ်တင်ပြီး Sunffold Owl Sanctuary ဇီးကွက်စောင့်ရှောက်ရေးဂေဟာသို့ ပို့ခဲ့ရကြောင်း Lad Bible သတင်းဌာနရဲ့ ဖော်ပြချက်အရ သိရှိရပါတယ်။ [email protected] Owl Sanctuary ဂေဟာက ဝန်ထမ်းတွေကတော့ အဆိုပါ ဇီးကွက်လေးကို ကုသမှုတွေ ပြုလုပ်ပေးကာ ဝိတ်လျှော့ပြီးမှ အဆိုပါဇီးကွက်လေးဟာ ပျံသန်းလို့ အဆင်ပြေမှာဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဇီးကွက်လေးရဲ့ ကိုယ်အလေးချိန်ဟာ ၂၄၅ ဂရမ်ဖြစ်နေပြီး အနည်းဆုံး ၂၀ ဂရမ်နဲ့ ၃၀ ဂရမ်ကြားထဲ ဝိတ်ချရမှာဖြစ်ကြောင်း ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဇီးကွက်လေးကို ရှာတွေ့ခဲ့ရတဲ့နေရာတစ်ဝိုက်မှာ ကြွက်တွေနဲ့ အင်းဆက်ကောင်တွေ ပေါများလွန်းပြီး ဇီးကွက်လေးဟာ […]
ဖုန်းကိုပဲ အာရုံစိုက်နေလို့ ကားဂိတ်က မောင်းတံကြီးကို ဝင်တိုက်မိခဲ့တဲ့ ကောင်မလေး
[email protected] Singapore Road Accident လူကြီးတွေပြောတာကြားဖူးကြမှာပါ။ စားသတိ လာသတိ သွားသတိဆိုတာ။ အရာရာကို သတိကပ်ပြီး လုပ်ဆောင်တာ အကောင်းဆုံးပါပဲ။ အခုလဲ စင်ကာပူနိုင်ငံက လမ်းမတစ်ခုပေါ်မှာ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဟာ သတိမထားမိဘဲ ကားပါကင်က မောင်းတံကြီးကို ဝင်တိုက်မိပြီး နောက်ပြန်လဲကျသွားတဲ့ ဟာသဆန်ဆန်အဖြစ်အပျက်လေးတစ်ခုကို တင်ပြချင်ပါတယ်။ Asia One သတင်းဌာနရဲ့ ဖော်ပြချက်အရ အဆိုပါ ဗီဒီယိုတိုလေးဟာ စင်ကာၤပူနိုင်ငံရှိ လူမှုကွန်ယက်မှာ တော်တော်ရေပန်းစားနေကြောင်းသိရပါတယ်။ ဗီဒီယိုထဲမှာတွေရတဲ့အတိုင်း ပထမတစ်ခါမှာလဲ အဆိုပါအမျိုးသမီးဟာ လမ်းကို မဆင်မခြင်ကူးခဲ့တာကြောင့် ကားတစ်စီးနဲ့ တိုက်မိမလိုတောင် ဖြစ်သွားပါတယ်။ ဒုတိယတစ်ခါမှာလဲ သူမရဲ့ နမော်နမဲ့နိုင်မှုကြောင့် ကားပါကင်က မောင်းတံကြီးကျလာတာကို မမြင်ပဲ ဝင်တိုက်မိကာ နောက်သို့ ပက်လက်လန်ကျခဲ့တာကို တွေ့ရမှာပါ။ တကယ့်ကို ဟာသဆန်ဆန်ဖြစ်ရပ်လေးတစ်ခုပါ။ [email protected] Singapore Road […]